'Yekupedzisira Kuda uye Testamente yaCharles Abernathy' Sets Director paNetflix
musha Horror Varaidzo Nhau 'Yekupedzisira Kuda uye Testamente yaCharles Abernathy' Sets Director paNetflix
Horror Varaidzo NhauHorror MoviesNetflix (bhaisikopo)
yakanyorwa na Waylon Jordan April 21, 2021
Alejandro Brugués akagadzirirwa kunongedza Yekupedzisira Kuda uye Testamente yaCharles Abernathy at Netflix zvichibva pane chinyorwa naChris LaMont naJoe Russo.
Sekureva kwekupedzisira, chirevo chinoverengwa seinotevera:
Nyaya iyi inotevera billionaire Charles Abernathy uyo, manheru ezuva rekuzvarwa kwake makumi manomwe nemashanu, anokoka vana vake vana vakatsauka kudzoka kumba nekutya kuti manheru ano mumwe munhu - kana chimwe chinhu - ari kuuya kuzomuuraya. Kuona kuti mhuri yake ichamubatsira kumudzivirira kubva kune chero chii chiri kuuya, Abernathy anoisa yega yega nhaka yavo pamutsara - hapana chavachawana kana akawanikwa afa mangwanani.
Brugués anobva kuArgentina uye ave achibatanidzwa nemapurojekiti mazhinji mumakore achangopfuura kusanganisira chikamu che Kupinda Murima, 50 States dzekutya, ABCs erufu 2, Nightmare Cinema, uye Kubva Muguruva kusvika Kwaedza: Iyo Series. Mutungamiriri akatora pfungwa dzevateereri mushure mefirimu yake Juan wevakafa.
Netflix yakatora iyo LaMont / Russo script mushure mekunge yaonekwa pa2018 BloodList. Ivo vaviri vakamboshanda pa Iyo Au Pair Nightmare uye Kuuraya Kakaoma iyo yakabata nyeredzi Bruce Willis.
Chirevo chemufirimu chinonzwika sechivimbiso. Wagadzirira kuona here Yekupedzisira Kuda uye Testamente yaCharles Abernathy? Regai tizive zvaunofunga mune zvakataurwa pazasi!
Alejandro BruguesNetflixYekupedzisira Kuda uye Testamente yaCharles AbernathyWaylon Jordan
Tarisa: 'werewolves Mukati me'Trailer yakafanana naMister Rogers ... Nepfuti
'High Tension' Director, Alexandre Aja 'Oxygen' Anowana Nyowani yeClaustrophobic Trailer